IApartment Pollenca-Lagune Leipzig (Iofisi yasekhaya +) - I-Airbnb
IApartment Pollenca-Lagune Leipzig (Iofisi yasekhaya +)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPatrick
++ IINDABA: rhoqo ngoMgqibelo + ngeCawa isidlo sakusasa ukusuka ngo-8:30 kusasa ukuya kwintsimbi ye-11:00 kusasa kwindawo yokutyela eLegerwall kwizibuko ++
sibonelela ngegumbi elipholileyo, elinezixhobo zokusebenza kwindlu yethu embindini weLeipzig New Lakeland. Inombono obukekayo we-Hainer See lagoon kunye ne-terrace ephahleni enendawo yokuphumla. Ilungele utyelelo olufutshane eLeipzig okanye njengendawo yokuhlala yexesha elide kwabangatshatanga kunye nabatshatileyo.
lifulethi elinezixhobo zala maxesha kwilali esanda kwakhiwa kwiLake Hainer. Kukho izinyuko ezijikelezayo endlwini onokuzisebenzisa ukufikelela kwigumbi lokuhlala.
Izixhobo ezimalunga ne-30m² yendlu enkulu ibandakanya umgangatho ophezulu we-laminate, iTV yesathelayithi, ikhitshi elahlukileyo, elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela elineshawa nokunye okuninzi. Kukho ibhedi enkulu yebhokisi-entwasahlobo kunye nelinen entsha.
Eyona nto ibalaseleyo yeflethi yimbonakalo entle yechibi kunye nethafa eluphahleni elinendawo yokuphumla yokuphumla.
Le ndlu ikwilali epholileyo yaseKahnsdorf. Oku kukumazantsi eLeipzig kumbindi weLeipziger Neuseenland. Ichibi laseKahnsdorf lelinye lamacebiso angaphakathi kumazantsi eLeipzig. Kwaye ngokungafaniyo neCospudener See ekufutshane okanye uMarkleeberger Bona, uya kufumana uxolo kunye nokuzola apha kwaye ungahlali rhoqo ngamaLeipzigers amaninzi echibini! Yiyo kanye lo mxube wabahlali kunye neendwendwe, ukuphithizela kunye nomoya okhululekileyo owenza le ndawo ibe nomtsalane.
Ipaki yemoto yoluntu ichasene ngokuthe ngqo kwaye ixabisa i-5 ye-euro ngosuku. Ukutshaya kunye nezilwanyana zasekhaya ngelishwa akuvumelekanga kwindawo yethu yokuhlala.
EKahnsdorf kukho indawo entsha yokwakhiwa kwe-ayisikrimu kwisitayile saseMeditera esisembindini welali. I-ayisikrimu kunye nekeyiki apha imnandi. Ngokuhlwa kukho izitya ezifudumeleyo. Kukho kwakhona iSchillerhaus. Le ibekwe kufutshane neKahnsdorf manor.
Akukho mathuba okuthenga eKahnsdorf ngokwayo. Ndincoma isixeko saseBorna (iivenkile ezininzi) ezikude ngemizuzu eyi-10 ngemoto okanye idolophu encinci yaseRötha (malunga nemizuzu emi-5 ngemoto).
Ukuba ungathanda ukufumana enye into, ndikunika la macebiso alandelayo:
- Ipaki yeBelantis yokuzonwabisa kunye nepaki yokuzonwabisa (umgama malunga ne-15 min)
- Iphuli yokuzonwabisa ye-RIFF, i-Bad Lausick (umgama omalunga ne-25 min)
-Isikolo sezemidlalo samanzi e-Wake-beach (ibhanki emantla ye-Hainer Bona)
-Isikolo se-Harbour bollard sailing (Kahnsdorf lagoon)
-Isixeko saseLeipzig esineendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile
4.85 · Izimvo eziyi-208